Daawo Video ay muddo todobaad ah daawadeen ilaa labo milyan ruux – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Daawo Video ay muddo todobaad ah daawadeen ilaa labo milyan ruux
3rd August 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Muuqaal laga qabtay Khabiir caafimaad oo reer Vietnam ah, isagoo toos uga hadlayey wareysi looga qaadayey TV ayaa waxaa muddo ka yar 1 todobaad ah daawaday 1.7 Milyan (Hal Milyan iyo todobo boqol oo ruux).
Waxa muuqaalkaas xiisaha u yeelay ayaa ah: In khabiirka caafimaad uu si deg deg isag tuuray mobile-kiisa oo soo dhacay, isagoo hawada toos ugu jira oo TV-ga laga daawanayo.
Markii taleefoonka gacanta ee uu watay soo dhacay ayuu si deg deg ah jeebkiisa hoose uga soo saaray, wuxuuna si xoog ah ugu tuuray dhulka, iyadoo la maqlay shanqartiisa xooga leh markii uu dhulka ku dhacay.
Khabiirkaani ma muujin wax shaki ah, mana isku mashqullin inuu Mobile-ka codka ka xiro ama damiyo sida inta badan ay dadku sameeyaan markii ay uu telkoodu kusoo dhaco meel aan munaasab aheyn, ee dhulka ayuu deg deg ugu tuuray.
Gabadha wariyaha ah ee wareysiga ka qaadeysay ayaa iyaduna muujin wax la yaab ah, waxeyna si caadi ah u sii wadatay su’aalo weydiinta khabiirkaas caafimaad.
Dhaqtarka ayaa markii ay arritaani qabsatay ka sheekjeynayey daadad horay ugu dhuftay dalka Vietnam.
Halkaa Daawo muuqaalka khabiirkaas iyo sida uu isu maareeyey markii Mobile-ku soo dhacay.
Dumar nadaafadda ka shaqeeya oo lagu qarxiyey Muqdisho
Weapons haul seized from ‘Al Shabaab’ suspects in Mogadishu